DesignCrowd: Crowdsource Graphic Designs si 485,000 + Ndị ọkachamara | Martech Zone
Anyị hụrụ ndị otu imewe oge niile anyị na-arụ ọrụ na ebe nrụọrụ weebụ, akwụkwọ ozi na akwụkwọ ndị ọzọ. Inwe otu imewe na njikere gị na-enyere aka na njirimara mmepụta gị na nkwekọrịta gị. Nke ahụ kwuru, enwere ọrụ na-ewepụta mmadụ niile n'otu oge na anyị kwesịrị ịpụ ebe ahụ ma mee ya. Ikekwe ọ bụ kaadị azụmahịa, akara ngosi maka ọrụ akụkụ, ma ọ bụ nkwakọ ngwaahịa. Mgbe ihe ndị a bilitere, anyị enweela ihe ịga nke ọma n'iji usoro ikuku igwe mmadụ.
DesignCrowd bụ otu n'ime ndị nyiwe - na n'elu 395,000+ imewe ọkachamara, ị nwere ike nweta ụfọdụ ịrịba na-arụpụta. Ma inwere ike ịrụ ọrụ ahụ ọnụ ala na ngwa ngwa.
[igbe ụdị = ”ihe ịga nke ọma” mmezi = ”aligncenter” klas = ”” obosara = ”90%”] Nweta $ 40 gbanyụọ ọrụ imepụta ọ bụla + Ndepụta Ndepụta E gosipụtara ($ 35 uru), naanị na DesignCrowd.com! Naanị tinye koodu coupon DC75OFF. Kwadoro site na 10/31. [/ Igbe]
Ikpo okwu na-arụ ọrụ dị mfe:
Zipu mkpirikpi - Kọwaa ọrụ gị ma sụgharịa ọhụụ gị n'ime obere nduzi maka ndị nrụpụta. Jide n'aka na ị nyere ọtụtụ nkọwa na ọbụna ụfọdụ ihe atụ. Chọghị igbusi oge dị ukwuu nke ndị nrụpụta yana ntụzịaka na-adịghị mma.
Nweta 100+ Designs - Ndị mmebe si n’akụkụ ụwa niile ga-edozi gị. Ga-enweta ọkwa igbe mbata na nke a.
Nzaghachi na Nyocha - Kekọrịta atụmatụ gị na netwọkụ gị iji nweta nzaghachi na ọkacha mmasị. Ọzọkwa, nye ọtụtụ nzaghachi na ndị na-ese ozi ozugbo maka mmelite.
Họrọ nke kacha mma - Họrọ imewe gị na onye mmeri ga-akwụ ụgwọ!
DesignCrowd bụ ahịa dị n'ịntanetị na-enye akara ngosi, mkpokọta weebụ, mbipụta yana ọrụ imepụta ihe eserese site na ị nweta ohere maka ndị nrụpụta eserese na-enweghị akwụkwọ na ụlọ nka eji arụ ọrụ gburugburu ụwa. DesignCrowd na-eji Crowdsourcing 2.0 onye ọrụ ziri ezi, nke na-adigide, nke dị elu karịa ebe ndị ọ bụla na-ese ihe nwere ike ịkwụ ụgwọ na ndị ahịa nwere ike ịchọgharị ndị nrụpụta ihe osise anyị kachasị elu ma were aka họrọ ndị ọkacha mmasị ha.
DesignCrowd nwere nkwa ego 100% ma ị nwere ike ịtọ oge ikpebiri gị ụbọchị atọ, atọ, ma ọ bụ iri. Ihe mbu gi gha agha iru n’ime awa iri abuo na ano. Ngwa ngwa ị zara ma nye nzaghachi zuru ezu, ka ndị na-emepụta ihe ga-awụlikwa elu ka ọhụụ ahụ na-abịa n'eziokwu. Ikwesiri ịtụ anya inweta ihe karịrị 3 n'aka ọtụtụ ndị na-emepụta ihe. Ọ bụrụ n'ịchọtaghị ihe ịchọrọ, ịnwere ike ịrịọ nkwụghachi n'ime ụbọchị 5 nke ọrụ ahụ.
Ngosipụta: Anyị gụnyere njikọ njikọta anyị na edemede a.
Tags: crowdsource imewecrowdsourcingÌgwèzọpụta ego